Dusha Go: beddelka iPad-ka ee Windows 10 iyo ku dhowaad isku qiimo | Wararka Gadget
Qolka Ignatius | | Laptops, Kiniiniga
Tan iyo markii la soo bandhigay noocii ugu horreeyay ee iPad, dib ugu soo laabashada 2010, shirkadda ku saleysan Cupertino waxay had iyo jeer calaamadeysay wadada horay loogu sii wado nidaamkan deegaan, nidaam deegaan oo soo maray iyo hoos u dhac sababtoo ah heerka hoose ee cusboonaysiinta isticmaalayaasha. In kastoo Apple ay ku dartay astaamo cusub sanadihii la soo dhaafay nooca iOS ee iPad-ka, tan sii wadaa inay bixiso tiro xaddidan.
Microsoft sidoo kale waxay abuurtay nidaam deegaan oo cusub oo kiniinno ah, laakiin si ka duwan qaabka Apple, kuwani waa ay maamusho nooc buuxa oo Windows ah, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay si raaxo leh ugu qaadan karaan kiniiniyadooda meel kasta oo ay doonaan, iyagoo marin u heli kara nooc kasta oo codsi ah oo ay u baahan yihiin, iyagoon u baahnayn inay adeegsadaan codsiyada lagu qaado kaniiniga, sida ku dhacday iPad-ka. Laakiin waxay ahayd mid aan qiimo lahayn.
Shirkadda fadhigeedu yahay Redmon ayaa hadda soo bandhigtay waxa ay u noqon karto beddel aad u ansax ah dhammaan kuwa isticmaala ee raadinaya kiniin badan oo jaban, oo qaali ah oo leh nooca buuxa ee Windows 10. Waxaan ka hadlaynaa Surface Go. Surface Go waa kiniin ah 10 inji, oo cabbirkiisu yahay 243,8 x 175,2 iyo 7,6 milimitir iyo miisaanka 544 garaam. Haddii aan ku darno kiiska kiiboodhka Nooca Cover, culeysku wuxuu kordhayaa 771 garaam.
1 Sifooyinka Go Surface Go
2 Qiimaha iyo helitaanka Surface Go
3 Ballaarinta qoyska dusha sare
Sifooyinka Go Surface Go
Surface Go wuxuu na siiyaa a akhristaha kaarka microSD, qalabka dhegaha la gashado iyo dekedda USB-C. Gudaha, Windows wuxuu na siiyaa laba qaabeyn oo kala duwan marka loo eego nooca nidaamka qalliinka: Windows 10 Hoyga leh S Mode iyo Windows 10 Pro oo leh S Mode. Windows S waa nooc ka mid ah Windows-ka oo kaliya kuu ogolaanaya inaad rakibato barnaamijyo laga heli karo dukaanka arjiga Microsoft, in kastoo aan awoodno naafo ah qaabkani si loogu beddelo qalabka kombuyuutarka si loo isticmaalo loona rakibo wixii codsi ah.
Marka laga hadlayo tilmaamaha farsamo, Surface Pro waxaa maamula Intel processor-ka Pentium Gold 4415Y 1,6 GHz.Gubid ahaan PC, waxqabadkeedu wuu kala duwanaan karaa iyadoo kuxiran xaddiga RAM ee aan ka helayno gudaha. Moodelkan ayaa laga heli karaa 4 iyo 8 nooc oo RAM ah. Marka la eego keydinta, Microsoft waxay na siisaa 3 nooc: 64 GB eMMC, 128 GB SSD iyo 256 GB SSD.
Shaashadda, oo ah dhinac kale oo adeegsadeyaal badani tixgeliyaan markay kiniin iibsanayaan, ayaa na siinaysa a Guddi 10-inch ah oo xallinaya 1.800 x 1.200 iyo saamiga shaashadda ee 3: 2. Sida laga soo xigtay Microsoft, ismaamulka 'Surface Go' wuxuu gaarayaa 9 saacadood, waana ismaamul ka dhigaya inuu ku dhowaad la mid yahay Apple iPad.
Moodelkan cusub ee ku dhex jira aagga dusha sare, wuxuu la jaan qaadayaa 'Surface Pen', wuxuu ku darayaa a qaybta dambe ee laga ceshan karo taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan dhigno meel kasta. Qalinka oogada (Surface Pen), iyo sidoo kale Nooca Daboolka oo isku daraya trackpad, ayaa si gooni ah loo iibiyaa.
Qiimaha iyo helitaanka Surface Go
Shirkadda Microsoft ayaa iibin doonta shirkadda 'Surface Go' bisha Ogosto 2deeda Maraykanka iyo Isbaanishka, marka lagu daro dalal kale, inkasta oo hadda, kaliya nooca Wifi ayaa la heli karaa iyada oo aan lahayn LTE isku xirnaanta, moodel ay shirkaddu sheegtay ayaa suuqa soo gali doona bilaha soo socda oo aan weli qiimahiisa weli shaaca ka qaaday.
Dusha Kala Bax 4GB RAM iyo 64GB oo ah keydinta eMMC oo leh Windows Home S: 399 Dollar.
Dusha Kala Bax 4GB RAM iyo 64GB oo ah keydinta eMMC oo leh Windows Pro S: 449 Dollar.
Dusha sare oo leh 8GB oo RAM ah iyo 128GB oo ah kaydinta SSD oo leh Windows Home S: 549 Dollar.
Dusha sare oo leh 8GB RAM iyo 128GB oo ah kaydinta SSD oo leh Windows Pro S: 599 Dollar.
Dusha sare oo leh 8GB oo RAM ah iyo 256GB oo ah kaydinta SSD oo leh xiriir LTE: sugaya helitaanka iyo qiimaha.
Qiimaha kor ku xusan waan gaar u ah kooxda. Labada Nooca Daboolka, Surface Pen iyo jiirka ayaa si gooni ah loo iibiyaa. Qiimaha kumbuyuutarka ayaa ku kala duwan inta udhaxeysa 99 iyo 129 dollars. Qiimaha jiirka waa $ 39 halka qalinka dusha sare uu yahay $ 99.
Waxaan ku jirnaa kiis la mid ah kii Appl's iPade, halka qiimaha kaliya uu kujiro qalabka iyo meesha dhamaan qalabka, daboolka kumbuyuutarka iyo Apple Pencil si madax banaan loogu iibinayo qiimo ka sareeya kuwa ay Microsoft siiso qalabkan.
Dhammaan moodooyinka 'Surface Go' waxay suuqa ku yimaadaan Windows S, ama nooca Home ama nooca Pro-ka. Noocani wuxuu na siinayaa xaddidaadyo gaar ah markii aan ku rakibeyno codsiyada ka baxsan Microsoft Store, laakiin haddii aan ku aragno inaad u baahan tahay, waan awoodnaa u cusbooneysii caadiga guriga iyo nooca Pro gebi ahaanba bilaash.
Ballaarinta qoyska dusha sare
Markii la bilaabay 'Surface Go', Microsoft waxay xilligan ku leedahay 5 nooc oo kala duwan suuqa dhexdiisa, sidaasna waxay ku xaqiijineysaa inay qaadatay koorsada ay ahayd inuu raaco dhawr sano ka horIn kasta oo, la arko heerka koritaanka ee qaabkan ganacsi ee cusub, waxay umuuqataa in sugitaanku uu uqalmay.
Hal caddeyn oo dheeri ah ayaa laga helaa bilowga qaabkan cusub dabool suuqa kiniinka, suuq aan Surface Pro waxba ka qabanin waxqabadkiisa sare awgood.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Laptops » Dusha Go: beddelka iPad-ka ee Windows 10 iyo ku dhowaad isku qiimo
Android P kuu oggolaan maayo inaad ku xirmaan shabakadaha Wi-Fi adoo adeegsanaya WPS
Nokia ayaa sii wadata howsheeda iyadoo Nokia 3.1 hadda laga heli karo Spain